Furtuu jijjiirraa yoo gaqqabdu, sochiin hantuutee baay'ina digriin digirii 45 ti murtaa'a. Yoo furtuu DirqalaaALT gaqqabdu, qabxiin haaraan kan dhuma waliin walitti hin hidhaman. Kun ammo wantoota qonyoowwan qabatanii siif heeyyama. Fuurtuu ALTDirqala wanta guddaa keessatti hanga ammatti kan hin cufne yoo ta'u, wanti xiqqaan wanta guddaa irraa hir'ata, kun akka qawaatti argama.
Bocawwan cufamoon oftumaan guutuu kabala Bal'ina Haalata sanduuqa irraaSararaa fi Guutuu keessatti agarsiifaman fudhata.
Qonyoo, Kan guutame
Boca guutuu cufame kan qonyoo irratti bu'uureffate kaasa. Bakka qonyoo jalqabuu barbaaddetti cuqaasi; harkisi gadhiisi ittaansuudhaan qaree bakka dhuma qonyoo barbaaddetti sochoosii cuqaasi. Qaree sochoosuun muraa sarara qajeelaa gara qonyootti ida'uuf irra deebi'i cuqaasi. Boca cufuuf lama-cuqaasi.
Boca cufame kan muraa sarara qajeelaa hammatu kaasa. Bakka rog-addee jalqabuu barbaaddetti cuqaasitii,muraa sarara kaasuuf harkisi. Dhuma muraa sarara hiikuuf irra deebi'ii cuqaasi; sarara muraa rog-addee hafe hiikuuf itti fufuun cuqaasi. Rog-addee kaasuu xumuunuuf lama-cuqaasi. Rog-addee gara roga digirii 45tti dirqamsiisuuf Jijjiirraa gaqqabi wayita cuqaastu.
Rog-addee (45°), Guutame
Boca cufamaa muraa sarara qajeelaa haamate kan geengoo digrii 45tti dirqamsiisu kaasa. Bakka roga-addee hafe hiikuuf cuuqaasuu itti fufi. Roga-addee kaasuu xumuuruuf lama-cuqaasi. Roga-addee geengoo digrii 45 tti hin dirqamne kaasuuf, jijjiirraa gaqqabi yeroo cuqaastu.
Sarara Unkaakka feete, Guutame
Sararaa akka feetee islaayidii kee yeroo gadhistuu,LibreOffice boca cufame hanga ka'uumsa sarara kaafamuu uuma. Bocichi sararawwan walini halluu bal'ini ammee guutuu ni danda'aa.
Sarara mura qajeeelaa walfakkaatuu kan haammatee geengoo digirii 45 dirqisifaman kaasa. Mura sarara kaasuuf harkisi, qabxii xumuraa muraa sararaa hiikuuf cuqaasi. Ittaansuun muraa sararaa haarawaa kaasuuf haarkisi kaafamu sararaa xumuruuf al lama-cuqaasi. Boca cufaa uumuuf, Dirqala fi ALTgaqqabuun al lama-cuqaasi.
Sararaa Unka akka feetee
Title is: Qonyoo